Kwekushongedza kwebindu nemavhiri engoro Art sens - mazano eimba nebindu
19.05.2019 Yakatumirwa na: Art Sense
Iro bindu, Zvishongedzo mubindu, Pfungwa Pamba
Kunyangwe isu tambofukidza musoro wekushongedzwa kwebindu nemavhiri engoro, mune iyi mitsara inotevera isu tichagonesa mamwe mazano ekuwedzera ekushandiswa kwavo. Iyo vhiri pachayo chiratidzo chakakomberedzwa uye kunyange kushandiswa kwayo kwakazvimiririra kunogona kuita ambiguous. Nekudaro, mune chimiro, kushandiswa kwayo kunoreva nyika kana nyika muenzaniso, icho chiratidzo chekubatana nepasi nechisikwa. Kugadzira maruva ebhedha kana fenicha inzira inozivikanwa, asi kana uine mavhiri maviri, nekushomeka kwekuita uye imwe yekubatanidza axle, iwe unogona kuzvishandura kuva maviri mavhiri, ayo anogona kushandiswa kurongedza gadheni gadheni, yakafanana neiya atorondedzerwa. mazano ekubata nyika nematoto.
kuronga gadheni, bindu, kurongedzwa kwebindu, kushongedza, ngoro yevhiri, mazano ebindu, mazano eaya, kurongedza mazano, landscaping mazano, mazano ane mavhiri engoro, mavhiri engoro, zviite iwe pachako, kusarudzika kweminda, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Iwe unoda kushongedza madziro ako nechimwe chinhu chitsva uye chinoshamisa? Ukasarudza kusarudza ...
Yakanaka mavara ekushongedza imba yekutandarira. Mazano mashoma ekushongedza imba yekutandarira mu ...
Isu tinopa mana akasarudzika mazano egadheni remunda kana Maitiro ekugadzira dziva mu ...
Kairaku-en - "Iyo Bindu Rekunakidzwa Pamwe" (chiJapanese - 偕 楽 園) ndiwo adage ...
Zviri nyore kugadzira barbecue kubva kumuchina wekare wekusona? Mhinduro ndeiyi: Ehe, kana paine mukadzi ...
Nepfungwa dzazvino dzekuchera gadheni pergola, isu tinoshuvira kuti tishandise izvi ...